Samsung na-ebupụta mkpuchi mkpuchi ya nke akpọrọ Samsung Mobile Care | Akụkọ akụrụngwa
Samsung na-ebupụta mkpuchi mkpuchi ya nke akpọrọ Samsung Mobile Care
Mgbe ị na-etinye ego na ama, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ dị elu, o yikarịrị ka anyị ga-ahọrọ ịgbakwunye usoro nke ngwa dịka mkpuchi mkpuchi na iko obi iji zere nke ahụ n'ihe gbasara ihe ọghọm ọ bụla anyị ga-atụba Ekwentị n'ime ihe mkpofu ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ mmezi dị oke ọnụ, ọ bụrụhaala na onye nrụpụta ahụ kwere ha.
Anyị nwekwara ike gbalịa itinye ya na mkpuchi ụlọ anyị, ihe dị mgbagwoju anya, nke mere na ọ bụrụ na ihe ọghọm, ọ bụ otu onye na-elezi anya idozi nrụzi ahụ ma ọ bụ na anyị nwere ike ịnweta nke ọhụrụ. Ọ bụrụ na ọ bụ Samsung smartphone, anyị nwere ike ịhọrọ wepu mkpuchi ohuru site na ulo oru Korea nke anakpo Samsung Mobile Care, ihe mkpuchi iji naanị elu-ọgwụgwụ Samsung ọnụ.
A na-eme mkpuchi ọhụụ ọhụụ site n'aka Allianz Global Assistance na ọ ga-arụzi mmebi ọ bụla nke ngwaọrụ anyị na-ata ahụhụ mgbe niile site na ọrụ ọrụ gọọmentị, na-enweghị ihe egwu na ama anyị na-aga site na ụlọ ahịa ndị China ruo n'oge ịgbanwe ihuenyo ya. Dị ka atụrụ anya Amụma mkpuchi a nwere nanị akụkụ abụọ n'ime afọ abụọ amụma ahụ dịgidere, mgbe nke a gasị, ụlọ ọrụ ahụ agaghị akpata ihe ọghọm ọhụụ.
Insurancenshọransị a nwere ọnụ ahịa nke euro 129, anyị nwere ike ịkwụ ya n'oge ego ya ma ọ bụ họrọ maka ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa, nke anyị ga-akwụ ụgwọ euro 5,99 kwa ọnwa n'oge ọnwa 24 ka mkpuchi ahụ dị. Ngwaọrụ ndị dakọtara na Samsung Mobile Care dị:
Echere, na mwepụta nke Galaxy S9 na S9 +, ụdị ndị okenye, nke ikpe a ga-abụ Galaxy S7 na S7 Edge, agaghịzi adị ịzụta site na mkpuchi. Samsung na-enye anyị oge nke ụbọchị 30 site na ụbọchị ịzụta gọọmentị iji nwee ike ịmekọrịta mkpuchi ahụ, emesịa ọ gaghị adị irè. Ọ bụrụ na anyị ere ọnụ, mkpuchi ahụ nwekwara ike zigara onye zụrụ ya, ọ bụrụhaala na ịkwụ ụgwọ mkpuchi ahụ na mbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Samsung na-ebupụta mkpuchi mkpuchi ya nke akpọrọ Samsung Mobile Care
Ngwaọrụ kachasị njọ nke 2017
Ndị a bụ egwuregwu efu n'efu maka Jenụwarị 2018 na PlayStation Plus